ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မှုသည် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အတွက် အရေးကြီးသည့်လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိပါက မည်သည့်လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းကိုမျှ အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့် ယနေ့ညနေပိုင်း တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စများအားအမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Tateshi HIGUCHI က ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်ချက် အပေါ်သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက် ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယသံအမတ်ကြီး Mr. Ichiro MARUYAMA တို့တက်ရောက်သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဦးစွာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျပ်အတည်းကို နားလည်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများကို အပြု သဘောဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည်ကို သိရှိပြီးထောက်ခံပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ရပ်တည်ချက်မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်ကူညီ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတကာတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော သတင်းအချက် အလက်များအပေါ်မူတည်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ကိစ္စအား ဆွေးနွေးရန်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ တစ်ချို့ အချက်အလက်များသည် မြန်မာ နိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လွဲမှားနေသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေမှန်များကို ကမ္ဘာကသိရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုကြောင်းဖြင့် အကြံပြုဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ယခုကဲ့သို့တန်ဖိုးရှိသော အပြု သဘောဆောင်သည့် အကြံပြု ချက်အတွက် ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ ၏ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနားလည်မှု အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြား၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လ ၉ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေဦးဆောင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖြင့် စစ်ဆေး ခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း တပ်မတော်စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အေးဝင်း ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေးပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ တင်ပြခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်လည်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအား တိုင်းပြည်ကိုအသိပေးခဲ့ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ် မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၉ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်း အချိန်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ လူအင်အားများစွာဖြင့် လုံခြုံရေးရဲကင်းများနှင့် တပ်ဌာနချုပ်တစ်ခုအား တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်း သာလွန်သည့်အင်အားဖြင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် လည်း လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် စည်းကမ်းတကျဖြင့် ခုခံကာကွယ် ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီတစ်ချို့ ထိခိုက် သေဆုံးမှုရှိသော်လည်း စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များ လုံးဝဖြစ် ပွားခြင်းမရှိတော့ဘဲ ယင်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ တစ်ဖက်နိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် အဆိုပါသြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်း ဖက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင်ပင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်သေများစွာကိုစစ်ဆေး၍ မည်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်၊ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ ထိခိုက်သေဆုံးမှုမည်မျှရှိသည်နှင့် ယင်းဖြစ်စဉ်များသည် တရားဥပဒေ နှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိတို့အားစိစစ်ခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကို အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်ပင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ များအား ဥပဒေနှင့်အညီတိကျစွာအရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့အင်အားကိုလည်း အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် တရားဥပဒေနှင့် အညီဖြစ် သည်ကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိရကြောင်းပြောကြားပြီး အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီများ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းတွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ် ၃၈ ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး၊ တပ်မတော်သား ၁ ဦးကျဆုံး၍ ၀န်ထမ်း ၂ ဦး အသတ်ခံရကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အထိဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း ၉၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ၂၃ ဦး အသတ်ခံရကြောင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၉၂ ဦးအသတ်ခံရပြီးရုပ်အလောင်း ၄၅ လောင်း တူးဖေါ်ရရှိကြောင်း၊ ပျောက်ဆုံးနေသူ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၁၉၂ ဦးကိုလည်း ယနေ့အထိ ပြန်လည်ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးကြောင်း၊ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့်ဆက်သွယ်သဖြင့် ယင်းကိုအကြောက် တရားဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဘင်္ဂါလီအချင်းချင်း လည်လှီးသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၂ ယောက်ရှိကြောင်း၊ မိမိလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အချိန်မီရောက်ရှိခဲ့သဖြင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်များစွာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ယင်းဖြစ်စဉ်များကို ARSA အဖွဲ့နှင့် ၎င်းတို့စည်းရုံးထားသော ဒေသခံဘင်္ဂါလီများက ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ၎င်းင်းတို့နှင့် ဘာသာတူ၊ လူမျိုးတူ၊ ယဉ်ကျေးမှုတူသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတွင်မပါဝင်သဖြင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုမရှိသည့် ဘင်္ဂါလီရွာများလည်းရှိကြောင်း၊ တစ်ချို့တစ်ဝက်ပါဝင်၍ ထွက်ပြေးသောရွာများ၊ တစ်ရွာလုံးပါဝင်၍ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှု များလည်းရှိနိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
၎င်းနောက် ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက ယင်းဖြစ်စဉ်မှန်များကို နိုင်ငံတကာက သိရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်ပါက မမှန်ကန်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအပေါ်သုံးသပ်၍ မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ နယ်မြေရှင်းလင်း လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို လိုအပ်ချက် အရလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း တစ်ဖက်တွင် ရလာဒ်အဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ အင်အား ၅ သိန်းခန့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွား၍ လူသားချင်းစာနာမှုရှုထောင့်အရ လိုအပ်ချက်များစွာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များပြုလုပ် ပေးနေသည်ကိုလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ် တွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း နိုင်ငံတကာကသိရှိ အောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးသည်။
ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ နေရပ်ရှောင် ရခိုင်လူမျိုးများ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များနှင့် ဘင်္ဂါလီများကိုပါ ထောက်ပံ့မှုများ၊ ဆေးဝါးကုသမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးနေကြောင်း၊ တပ်မတော်မှဦးဆောင်၍ စေတနာရှင်အလှူရှင်များ မှလှူဒါန်းသည့် ပစ္စည်းများ၊ ငွေကြေး များဖြင့် ထောက်ပံ့မှုများကိုလည်း တပ်မတော်လေယာဉ်၊ ရေယာဉ်များဖြင့် ခေါက်ရေများစွာပို့ဆောင်၍ လိုအပ်နေသည့်နေရာများသို့ အရောက်ပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ပေးနေ ကြောင်း၊ မြန်မာ့ပိုင်နက်နယ်မြေကျော်လွန်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသူများ မှာလည်း မိမိတို့မှ ထွက်ပြေးစေရန်မောင်းနှင်ထုတ်ခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ တွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု လည်းလုံးဝ မရှိကြောင်း၊ ယင်းဘင်္ဂါလီများအနေဖြင့် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်၍ပြေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အေးဆေးစွာထွက်ခွာ သွားခြင်း ဖြစ်သည်ကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရကြောင်း၊ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူများက ထွက်ခွာခြင်းမပြုရန်ပြောဆိုသည်ကိုပင် လက်မခံကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားသူများ ကိုလည်း ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်များအရ ပြန်လည်လက်ခံသွားရန်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် တက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက် ခဲ့ကြသည်။
ရခိုငျပွညျနယျအရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေး
လုံခွုံရေးထိနျးသိမျးဆောငျရှကျမှုသညျ လူ့အခှငျ့အရေးစောငျ့ရှောကျမှု၊ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အတှကျ အရေးကွီးသညျ့လုပျဆောငျမှုအဖွဈရှုမွငျကွောငျး၊ လုံခွုံမှုမရှိပါက မညျသညျ့လူသားခငျြး စာနာ ထောကျထားမှုလုပျငနျးကိုမြှ အကောငျအထညျ ဖျေါဆောငျရှကျနိုငျမညျမဟုတျကွောငျးဖွငျ့ ယနညေ့နပေိုငျး တှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့တှဆေုံ့ပွီး ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စမြားအားအမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Tateshi HIGUCHI က ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေ အကွမျးဖကျမှုဖွဈစဉျတှငျ မွနျမာ့ တပျမတျောနှငျ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့မြား၏ လုပျဆောငျခကျြ အပျေါသုံးသပျ ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီး ခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျ ကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ ဒုတိယသံအမတျကွီး Mr. Ichiro MARUYAMA တို့တကျရောကျသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ဦးစှာဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးက ဂပြနျနိုငျငံအစိုးရအနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ မွနျမာနိုငျငံ၏အကပျြအတညျးကို နားလညျပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျော၏လုံခွုံရေးဆိုငျရာမြားကို အပွု သဘောဖွငျ့ လုပျဆောငျနသေညျကို သိရှိပွီးထောကျခံပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏နိုငျငံ တညျဆောကျရေးလုပျငနျးမြားကိုလညျး ရပျတညျခကျြမပွောငျးလဲဘဲ ဆကျလကျကူညီ လုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ သို့သျောလညျး နိုငျငံတကာတှငျဖွဈပျေါနသေော သတငျးအခကျြ အလကျမြားအပျေါမူတညျပွီး ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီတှငျ မွနျမာနိုငျငံ ရခိုငျပွညျနယျအရေး ကိစ်စအား ဆှေးနှေးရနျလုပျဆောငျနကွေောငျး၊ တဈခြို့ အခကျြအလကျမြားသညျ မွနျမာ နိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျော၏အမှနျတကယျလုပျဆောငျမှုမြားနှငျ့လှဲမှားနသေဖွငျ့ ရခိုငျပွညျနယျဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ အခွအေနမှေနျမြားကို ကမ်ဘာကသိရှိအောငျလုပျဆောငျရနျလိုကွောငျးဖွငျ့ အကွံပွုဆှေးနှေးသညျ။
ထို့နောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ယခုကဲ့သို့တနျဖိုးရှိသော အပွု သဘောဆောငျသညျ့ အကွံပွု ခကျြအတှကျ ၀မျးမွောကျပါကွောငျး၊ ဂပြနျနိုငျငံအစိုးရ ၏ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျော၏ လုပျဆောငျခကျြမြားကို သိရှိနားလညျမှု အတှကျလညျး ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး ပွနျလညျပွောကွား၍ ၂၀၁၆ ခုနှဈ အောကျတိုဘာ လ ၉ ရကျတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး အကွမျးဖကျမှုဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျပွီး နိုငျငံတျောဒုတိယသမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှဦေးဆောငျသညျ့ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ ဖွငျ့ စဈဆေး ခဲ့ကွောငျး၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့လညျး တပျမတျောစဈဆေးရေးအရာရှိခြုပျ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး အေးဝငျး ဦးဆောငျသညျ့အဖှဲ့ဖွငျ့စဈဆေးပွီး နိုငျငံတျောအစိုးရထံ တငျပွခဲ့ကွောငျး၊ နိုငျငံတျောအစိုးရအနဖွေငျ့လညျး စဈဆေးတှရှေိ့ခကျြမြားအား တိုငျးပွညျကိုအသိပေးခဲ့ကွောငျးရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျ၍ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနဖွေ့ဈစဉျ မှာ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ လ ၉ ရကျနဖွေ့ဈစဉျနောကျပိုငျး အခြိနျယူကွိုတငျပွငျဆငျ၍ လူအငျအားမြားစှာဖွငျ့ လုံခွုံရေးရဲကငျးမြားနှငျ့ တပျဌာနခြုပျတဈခုအား တဈခြိနျတညျးတဈပွိုငျတညျး သာလှနျသညျ့အငျအားဖွငျ့ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သို့သျော လညျး လုံခွုံရေးတာဝနျရှိသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားအနဖွေငျ့ စညျးကမျးတကဖြွငျ့ ခုခံကာကှယျ ထိနျးသိမျး နိုငျခဲ့ကွောငျး၊ ထိုသို့ထိနျးသိမျးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ အကွမျးဖကျဘင်ျဂါလီတဈခြို့ ထိခိုကျ သဆေုံးမှုရှိသျောလညျး စကျတငျဘာလ ၅ ရကျနနေ့ောကျပိုငျးတှငျ အကွမျးဖကျမှုဖွဈစဉျမြား လုံးဝဖွဈ ပှားခွငျးမရှိတော့ဘဲ ယငျးအကွမျးဖကျအဖှဲ့မြား တဈဖကျနိုငျငံဘကျသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျသှားခဲ့ကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ အဆိုပါသွဂုတျလ ၂၅ ရကျနမှေ့စတငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အကွမျး ဖကျမှုဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍လညျး စကျတငျဘာလအတှငျးတှငျပငျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးတဈဦး ခေါငျးဆောငျသောအဖှဲ့ဖွငျ့ စုံစမျးစဈဆေးမှုမြားပွုလုပျခဲ့ပွီး ဖွဈကွောငျး၊ သကျသမြေားစှာကိုစဈဆေး၍ မညျသညျ့အတှကျဖွဈသညျ၊ မညျကဲ့သို့ ဖွဈပကျြခဲ့သညျ၊ ထိခိုကျသဆေုံးမှုမညျမြှရှိသညျနှငျ့ ယငျးဖွဈစဉျမြားသညျ တရားဥပဒေ နှငျ့ ညီညှတျမှု ရှိ/မရှိတို့အားစိစဈခဲ့ပွီး စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့၏ အစီရငျခံစာကို အခကျြအလကျမြား ပိုမိုပွညျ့စုံစရေနျ ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့ ဖွဈစဉျဖွဈပှားနခြေိနျတှငျပငျ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ မြားအား ဥပဒနှေငျ့အညီတိကစြှာအရေးယူ ဆောငျရှကျရနျညှနျကွားကွပျမတျလုပျဆောငျခဲ့ခွငျး၊ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့အငျအားကိုလညျး အနညျးဆုံးဖွဈအောငျ စီမံဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးတို့ကွောငျ့ တရားဥပဒနှေငျ့ အညီဖွဈ သညျကို စဈဆေး တှရှေိ့ရကွောငျးပွောကွားပွီး အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီမြား၏ အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျမှု ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနေ့ တဈရကျတညျးတှငျ တိုကျခိုကျမှုဖွဈစဉျ ၃၈ ခုဖွဈပှားခဲ့ပွီး လုံခွုံရေးရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၁၁ ဦး၊ တပျမတျောသား ၁ ဦးကဆြုံး၍ ၀နျထမျး ၂ ဦး အသတျခံရကွောငျး၊ စကျတငျဘာလ ၅ ရကျနအေ့ထိဖွဈစဉျစုစုပေါငျး ၉၄ ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ပွီး ဒသေခံတိုငျးရငျးသား ၂၃ ဦး အသတျခံရကွောငျး၊ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျ ၉၂ ဦးအသတျခံရပွီးရုပျအလောငျး ၄၅ လောငျး တူးဖျေါရရှိကွောငျး၊ ပြောကျဆုံးနသေူ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျ ၁၉၂ ဦးကိုလညျး ယနအေ့ထိ ပွနျလညျရှာဖှမေတှရှေိ့သေးကွောငျး၊ အစိုးရအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့နှငျ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျ မြားနှငျ့ဆကျသှယျသဖွငျ့ ယငျးကိုအကွောကျ တရားဖွငျ့ ထိနျးခြုပျနိုငျရနျ ဘင်ျဂါလီအခငျြးခငျြး လညျလှီးသတျဖွတျမှုကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၃၂ ယောကျရှိကွောငျး၊ မိမိလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြား အခြိနျမီရောကျရှိခဲ့သဖွငျ့ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားပွညျသူမြားနှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၏ အသကျမြားစှာကို ကာကှယျပေးနိုငျခဲ့ကွောငျး ၊ယငျးဖွဈစဉျမြားကို ARSA အဖှဲ့နှငျ့ ၎င်းငျးတို့စညျးရုံးထားသော ဒသေခံဘင်ျဂါလီမြားက ကြူးလှနျခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ ၎င်းငျးငျးတို့နှငျ့ ဘာသာတူ၊ လူမြိုးတူ၊ ယဉျကြေးမှုတူသညျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျ သို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျသှားခွငျးဖွဈကွောငျး၊ အကွမျးဖကျမှုတှငျမပါဝငျသဖွငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျမှုမရှိသညျ့ ဘင်ျဂါလီရှာမြားလညျးရှိကွောငျး၊ တဈခြို့တဈဝကျပါဝငျ၍ ထှကျပွေးသောရှာမြား၊ တဈရှာလုံးပါဝငျ၍ ရှာလုံးကြှတျထှကျပွေးတိမျးရှောငျမှု မြားလညျးရှိနိုငျကွောငျးရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
၎င်းငျးနောကျ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးက ယငျးဖွဈစဉျမှနျမြားကို နိုငျငံတကာက သိရှိအောငျလုပျဆောငျရနျ လိုအပျကွောငျး၊ သို့မဟုတျပါက မမှနျကနျသညျ့ သတငျးအခကျြ အလကျမြားအပျေါသုံးသပျ၍ မွနျမာ နိုငျငံအပျေါ ဆုံးဖွတျခကျြခမြှုဖွဈနိုငျကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြား၏ နယျမွရှေငျးလငျး လုံခွုံရေးလုပျဆောငျမှုမြားကို လိုအပျခကျြ အရလုပျဆောငျခွငျးဖွဈသျောလညျး တဈဖကျတှငျ ရလာဒျအဖွဈ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ အငျအား ၅ သိနျးခနျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျသှား၍ လူသားခငျြးစာနာမှုရှုထောငျ့အရ လိုအပျခကျြမြားစှာဖွဈပျေါနကွေောငျး၊ လူမှုဝနျထမျးကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျလညျနရော ခထြားရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေး ဦးဆောငျသညျ့အဖှဲ့ဖွငျ့ ကူညီထောကျပံ့မှုမြား၊ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု မြားပွုလုပျ ပေးနသေညျကိုလညျး ရခိုငျပွညျနယျခရီးစဉျ တှငျ တှမွေ့ငျခဲ့ရပါကွောငျး၊ ယငျးလုပျဆောငျခကျြမြားကိုလညျး နိုငျငံတကာကသိရှိ အောငျလုပျဆောငျရနျလိုအပျကွောငျး အကွံပွုဆှေးနှေးသညျ။
ဆှေးနှေးခကျြမြားအပျေါ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးရှိ နရေပျရှောငျ ရခိုငျလူမြိုးမြား၊ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြား၊ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျမြားနှငျ့ ဘင်ျဂါလီမြားကိုပါ ထောကျပံ့မှုမြား၊ ဆေးဝါးကုသမှုမြား လုပျဆောငျပေးနကွေောငျး၊ တပျမတျောမှဦးဆောငျ၍ စတေနာရှငျအလှူရှငျမြား မှလှူဒါနျးသညျ့ ပစ်စညျးမြား၊ ငှကွေေး မြားဖွငျ့ ထောကျပံ့မှုမြားကိုလညျး တပျမတျောလယောဉျ၊ ရယောဉျမြားဖွငျ့ ခေါကျရမြေားစှာပို့ဆောငျ၍ လိုအပျနသေညျ့နရောမြားသို့ အရောကျပို့ဆောငျထောကျပံ့ပေးနေ ကွောငျး၊ မွနျမာ့ပိုငျနကျနယျမွကြေျောလှနျပွီး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ ရောကျရှိနသေူမြား မှာလညျး မိမိတို့မှ ထှကျပွေးစရေနျမောငျးနှငျထုတျခွငျးလုံးဝမရှိကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံ တှငျလူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှု လညျးလုံးဝ မရှိကွောငျး၊ ယငျးဘင်ျဂါလီမြားအနဖွေငျ့ ကွောကျရှံ့ထိတျလနျ့၍ပွေးခွငျးမြိုးမဟုတျဘဲ အေးဆေးစှာထှကျခှာ သှားခွငျး ဖွဈသညျကို ဓာတျပုံမှတျတမျးမြားတှငျ တှရေ့ကွောငျး၊ အစိုးရအုပျခြုပျရေးမှ တာဝနျရှိသူမြားက ထှကျခှာခွငျးမပွုရနျပွောဆိုသညျကိုပငျ လကျမခံကွောငျး၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ ထှကျပွေးသှားသူမြား ကိုလညျး ၁၉၉၃ ခုနှဈတှငျ နှဈနိုငျငံ ညှိနှိုငျးသဘောတူညီခကျြမြားအရ ပွနျလညျလကျခံသှားရနျရှိကွောငျး၊ သို့သျော ၎င်းငျးတို့ အနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ တညျဆဲဥပဒမြေားကို လေးစားလိုကျနာရနျလိုအပျကွောငျး ဆှေးနှေး ပွောကွားသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ တကျရောကျ လာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျ ခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၂)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်